ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - Hangzhou Mingjue Technology Co. , Ltd.
Hangzhou Mingjue နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Hangzhou Mingjue Technology Co. , Ltd. သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သောစက်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာပေါင်းစည်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာ့အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ရန်ထိပ်တန်းစက်ရုံသုံးခုနှင့်အတူတကွအလုပ်လုပ်သည်။ ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးကတည်းကကျွန်ုပ်တို့သည်လေဆာထွင်းထုခြင်း၊ ဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်အမှတ်အသားပြုခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆန်းသစ်တီထွင်သူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြsolနာဖြေရှင်းသူများဖြစ်ကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာကိုအဆင့်မြင့်အရည်အသွေးမြင့်လေဆာစနစ်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲရန်နှင့်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသည်။
Hangzhou Mingjue Technology CO ။ , LTD သည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ CO2 လေဆာဖြင့်ပြုလုပ်သောထွင်းထုခြင်းနှင့်ဂေါက်သီးရိုက်စက်၊ galvanometer လေဆာစက်၊ ဖိုင်ဘာလေဆာဖြတ်စက်နှင့်လေဆာအမှတ်အသားစက်များကိုအထူးပြုသည်။ ထုတ်ကုန်လိုင်းတွင်မော်ဒယ် ၁၀၀ ကျော်ပါဝင်သည်။
လျှောက်လွှာများတွင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊ အထည်အလိပ်၊ အဝတ်အထည်၊ သားရေဖိနပ်၊ စက်မှုထည်၊ ပရိဘောဂ၊ ကြော်ငြာ၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်းနှင့်ထုပ်ပိုးခြင်း၊ အီလက်ထရွန်းနစ်၊ ပရိဘောဂ၊ အလှဆင်ခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့်နည်းပညာအတော်များများသည်အမျိုးသားမူပိုင်ခွင့်များနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်များရရှိထားပြီး CE နှင့် FDA ၏ခွင့်ပြုချက်ရရှိထားသည်။
၁။ အော်ဒါမှာယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းလုပ်ငန်းခွင် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ သင်၏မေးခွန်းများအတွက် ၂၄ နာရီရပ်တည်ပေးသည်။
သင်လိုချင်သောကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေရန်စက်ရုံများစွာကိုသင်ခွဲရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထို့နောက်ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးမှလူအမျိုးမျိုးကိုမေးမြန်းပါ။ သင်ဒီမှာအရာအားလုံးကိုရှာပြီးသင်လိုချင်တာကိုရဖို့လူတစ်ယောက်နှင့်သာဆက်သွယ်ပါ။
၃။ အရည်အသွေးပြည့် ၀ သောစစ်ဆေးမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ ထွက်မပို့မီစစ်ဆေးမှု ၁၀၀% ။
4. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးနယ်ပယ်၌အတွေ့အကြုံ ၁၂ နှစ်ကျော်ရှိပြီးအကောက်ခွန်ကိစ္စများ၊ ကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်း၊ အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များစသည်ဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများသာမက A မှ Z သို့အမှာစာအပြည့်အစုံကိုလည်းသင့်အားအကြံပေးသည်။
၁။ အရည်အသွေး CNC စက်အစိတ်အပိုင်းများကိုကြာရှည်ခံစေရန်အာမခံသည်
4. ထုချိတ်ဆက်ရန် USB port ကို
၅။ Windows 8,7(64 သို့မဟုတ် 32 bit)၊ XP, 2000 သဟဇာတ (iOS စနစ်နှင့်မသက်ဆိုင်)
၆။ FDA အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရ
ပိုပြီး Made China တွင်ကမ္ဘာကြီးကိုလူသိများပါစေ။